Kitra – “Pro-league 2019”: hamaritra izay ho tompondakan’i Madagasikara | NewsMada
Kitra – “Pro-league 2019”: hamaritra izay ho tompondakan’i Madagasikara
Miova endrika indray ny fifaninanam-pirenena, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra, amin’ity. Ekipa 12 ny hiady lohany ka hifaninana ao anatin’ny “Pro-league”. Haharitra hatramin’ny volana jona 2020 ny lalao.
Tsy “THB ligue des champions” intsony ny iantsoana ny fifaninanam-pirenena, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra, manomboka izao, fa “Pro league”, tantanin’ny CFEM na ny (Association des club de football elite de Madagascar), miara-miasa amin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), mandritra ny taom-pilalaovana efatra. Nosonoivina, omaly tetsy amin’ny hotel Le Pietra Analakely, izany.
12 ny klioba hiady lohany, amin’ity. Ny valo, notsongaina avy amin’ny division nationale: ny Cnaps Sport Itasy, ny Jet Mada Itasy, ny Zanakala FC, ny FCA Ilakaka, ny AS Adema, ny 3FB Toliara, ny Fosa Jr Boeny ary ny Ajesaia. Ny roa kosa, niakatra avy amin’ny ligue 2: ny Tia Kitra sy ny Club M avy any Toamasina. Ny roa ambiny, ireo tsara toerana indrindra, nandritra ny taom-pilalaovana: ny Elgeco Plus sy ny Cosfa.
Hanomboka ny 26 oktobra ho avy izao ny fifanintsanana ka haharitra hatramin’ny 21 jona 2020. Ho tompondakan’i Madagasikara ny ekipa voalohany amin’io ka hisolo tena an’i Madagasikara, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika.
Hanao lalao mandroso sy miverina ireo klioba ireo, izany hoe, hanao lalao 22 avy. Tanjon’ny CFEM sy ny FMF amin’izao ny hahazoana mitily mpilalao hoavin’ny Barea de Madagascar ary hamoahana kintan’ny kitra “superstar”, toa an-dry Ronaldo sy ry Messi. Ankoatra izay, hiavaka ny fifaninanam-pirenena satria hisy ireo handeha mivantana amin’ny fahitalavitra na ho hita amin’ny tambanjotran-tserasera.
Hisy lalao 132 arahina mandritra ny andro 22, hifanintsanan’ireo klioba ireo. Ezahin’ny mpikarakara ny hamerenana indray ny fitiavan’ny Malagasy hijery baolina ka tanjona ny hahitana mpijery 600 000. Hisy ihany koa amin’ny fiafaran’ny fifaninanana ny fanendrena mpilalao mendrika.
Toy izao ireo fandaharan-dalao ny 26 oktobra
3FB # AS Adema
Cosfa # Tia Kitra
Club M # Elgeco Plus
Ajesaia # Fosa Js
Cnaps Sport # FCA Ilakaka
Zanakala FC # As Jet Mada